Ngaphantsi kweSilivere Spruce-Jacuzzi, Ruska Bania
Koszarawa, Śląskie, Poland
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAleksander
I-Pod Srebrzystym Świerkiem yindlwana yonyaka wonke elungele ulwamkelo olutofotofo lwabantu abayi-4-6. I-cottage ixhotyiswe ngokupheleleyo. Sinikezela ngekhitshi, i-attic ye-attic enebhedi enkulu ephindwe kabini kunye neebhedi ezimbini ezingatshatanga, igumbi lokuhlambela, kunye negumbi lokuhlala kunye ne-cornea enkulu, ekhululekile, eyenziwa yi-fireplace yamatye. Ukusuka ekhitshini nakwigumbi ungayonwabela imbonakalo entle yeentaba.
Ngokuhlwa, sikhuthaza ukuba ukhanyise umlilo kwindawo yomlilo elungiselelwe ngokukodwa kwithambeka.
Indlu ibekwe eKoszarawa-Bystra kwindlwana yaseMolusiówka, kumphakamo omalunga ne-750m ngaphezu komphakamo wolwandle. I-Molusiówka yindawo apho iintaba ezinjalo zidibana njenge: Grupa Mędralowa, Pasmo Jałowieckie, Pasmo Solnisk okanye iPasmo Laskowski. Enkosi kwiindlela ezininzi zokukhwela intaba kunye nokuhamba ngebhayisekile, ungangena ngokwenyani ezintabeni apha, kwaye ukonwabele iimeko ezintle kakhulu zokuhla kunye ne-skiing enqumla ilizwe. Ukuhlala eMolusiówka ayisiyiyo kuphela indlela efanelekileyo yokuphumla, kodwa kwakhona yiparadesi yokwenyani yabakhweli beebhayisikile. Sineendlela ezininzi ezinomdla apha, kwaye kufutshane kukho iindlela zebhayisekile zeentaba eziyinxalenye ye-Babia Góra Trails complex. Awuzodikwa apha..
Kodwa akuphelelanga apho! Abathandi bokuhlamba ngaphandle ngokuqinisekileyo baya kuba nomdla kwithuba lokuthatha ithuba elibiziweyo Umbhobho oshushu waseRashiya, okt ibhafu yebhamu eshushu. Enye iseshoni enjalo yanele ukuva imiphumo enenzuzo kumzimba. (inkonzo eyongeziweyo ihlawulwa kwisiza - kwixesha lasebusika, ukusetyenziswa kwe-sump kuxhomekeke kwimozulu kwaye kunokukhawulelana - yiqabaka enzima, apho sinokubonelela ngolunye usuku lokuhlamba).
Abavuni bamakhowa okanye abavuni bamaqunube baya kufumana iparadesi yokwenyani apha.
Kwiindwendwe zethu, silungiselele i-terrace enesihlalo esikhululekile, kunye negadi encinci apho ungaphumla kwindawo yokuphumla kwelanga okanye ulale nje engceni. Ukuhamba ukuya emlanjeni kuthatha imizuzu eyi-10 kuphela, apho unokupholisa khona ngeentsuku ezishushu. Indlu yokusetyenziswa ngokukhethekileyo kweendwendwe.
Indawo efanelekileyo yokukhwela intaba okanye ukuhamba ngebhayisekile ezintabeni. Iindlela ezininzi zokuhamba intaba, umz. ukuya eBabia Góra, ePilsko, njl.
Ukusondela emlanjeni - i-10 min. hamba.
Sihlala e-Bielsko, imizuzu engama-45 ukusuka kwi-cottage. Sizisa izitshixo kwaye sibonise indlu. Ukuba kuyimfuneko, sinokuza ngokukhawuleza. Sifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku
Ukufikelela kwindlu ngendlela ye-asphalt, ngaphandle kokuba icandelo lokugqibela li-300m ecaleni kwendlela yehlathi. Ngesicelo, sinikezela ngesithuthi samahhala ukuya emnyango.
Renta ubuncinane iintsuku ezi-2.
Sihlala e-Bielsko, imizuzu engama-45 ukusuka kwi-cottage. Sizisa izitshixo kwaye sibonise indlu. Ukuba kuyimfuneko, sinokuza ngokukhawuleza. Sifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuk…